Cunaqabateyno dheeri ah oo ka dhan ah Militariga Myanmar
Mareykanka ayaa ku dhawaaqay cunnaqabateyn dheeri ah oo lagu soo rogay xukunka militari ee dalka Burma. Tan iyo afgambigii militari ee bishii February xukunka looga tuuray dowladdii sida dimoqraadiga ah loo soo doortay, taliska militariga ayaa si adag uga jawaabay mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka dimoqraadiyadda doonaya, waxaana ku dhintay in ka badan 800 oo qof, oo ay ku jiraan caruur, kummanaan kalana waa la xiray.
17-kii March, Mareykanku waxa uu beegsaday hay’ad iyo 16 qof oo xiriir la leh rajiimka. Hay'adda ayaa ah Golaha Maamulka ee dalka, oo ah mid ay militarigu u abuureen si loo taageero afgembiga sharci darrada ah. 13 ka mid ah shakhsiyaadka ayaa xubno muhiim ah waxa ay ka yihiin xukunka militariga, iyadoo saddexda hartayna ay yihiin carruur qaangaar ah oo ay dhaleen saraakiil milateri oo horay loogu daray liiska. Ku dhawaaqistan awgeed, dhammaan hantida iyo macaashka hantida ay shakhsiyaadkani ku yeelan karaan Mareykanka ayaa la xannibay. Intaas waxaa dheer, illaa la helo oggolaansho gaar ah mooyee, dhammaan macaamilka ganacsi ee muwaadiniinta Mareykanka ah ee ku nool Mareykanka gudihiisa ee ku lug leh hantida shakhsiyaadkan la carabaabay waa mamnuuc.
Tallaabo tan la mid ah, Boqortooyada Ingiriiska iyo dowladda Canada ayaa iyana soo rogay cunnaqabateyn looga jawaabayo afgenbiga militari ee Burma.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda Antony Blinken ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, “Sida uu sheegay madaxweyne Biden, Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa in uu riixo la xisaabtanka kuwa mas’uulka ka ah afgembiga. Ficilladeena maanta ayaa hoosta ka xarriiqaya go'aankeenna iyo kan saaxiibadeenna ee aan cadaadiska siyaasadeed iyo midka dhaqaale ku saarayno rajiimka illaa inta uu ka gaabinayo in uu rabshadaha joojiyo iyo in uu qaado tallaabooyin macno leh oo uu ku ixtiraamayo rabitaanka dadka.”
Xoghaye Blinken ayaa tilmaamay in Mareykanka iyo xulufadiisa ku jira ururka G7 ay soo dhoweeyeen qorshaha shanta qodob ka kooban ee khuseeya Burma kaasi oo laga soo saaray shirkii ay hoggaamiyeyaasha urur goboleedka ASEAN yeesheen dabayaaqadii bishii April. Qorshahaasi ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo rabshadaha; ay dhinacyada oo dhan wada hadlaan; ergey gaar ah oo fududeeya dhexdhexaadinta; gargaar bani’aadamnimo oo ay fidiyaan dalalka ku jira ASEAN, iyo booqasho uu ergayga gaarka ah iyo wafdigiisa ku tagaan dalkaasi si ay ula kulmaan dhammaan dhinacyada ay khuseyso. Mr. Blinken ayaa ku booriyay taliska militari ee Burma in ay si deg-deg ah oo shuruud la’aan ah fulinta qorshahan kala shaqeeyaan ASEAN iyo QM.
“Nasiib-darro,” ayuu yiri Xoghaye Blinken, “xukunka militari waxa uu ilaa hadda diiday in uu ku shaqeeyo hab maangal ah, mana uusan isku dayin in uu Burma dib ugu so celiyo wadadii dimuquraadiyadda, wuxuuna sii wadaa caburinta naxariis la’aanta ah iyo rabshadaha ka dhanka ah muwaadiniintiisa.”
Mareykanka ayaa ku boorinaya in dhammaan dalalka kale ay ka fikiraan tallaabooyin la saaro militariga si loo helo isla xisaabtanka afgenbiga, xadgudubyada xuquuqda aadanaha, iyo in laga hortago rabshado kale.